१५ प्रश्नहरू जुन भविष्यवाणी गर्न सक्दछ कि तपाईंको सम्बन्ध लामो समय सम्म रहनेछ, मनोविज्ञान प्राध्यापकका अनुसार - फुर्सद
१५ प्रश्नहरू जुन भविष्यवाणी गर्न सक्दछ कि तपाईंको सम्बन्ध लामो समय सम्म रहनेछ, मनोविज्ञान प्राध्यापकका अनुसार
Reporter मे 21, 2020 जीवनशैली, मनोरन्जन
प्रेममा हुनु अविश्वसनीय हुन सक्छ – तर यसको गुलाब-टिन्टेड चश्माको माध्यमबाट हाम्रा गल्ती सम्बन्धी सम्बन्धहरू हेर्ने बानी पनि छ।
लेवान्डोव्स्कीका अनुसार, “हो,” ईमानदारीसाथ यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन, जुन कि विज्ञान-समर्थित डाटा र अन्तर्ज्ञान दुवैमा निर्भर गर्दछ, यसको मतलब तपाइँको सम्बन्धमा रहन लायक छ।
के तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई एक राम्रो व्यक्ति बनाउँछ, र के तपाईं उनीहरूको लागि समान गर्नुहुन्छ?
के तपाईं र तपाईंको पार्टनर दुबै भावनाहरू साझा गर्न सहज हुनुहुन्छ, एक अर्कामा निर्भर रहन, नजिकको, र अर्को व्यक्ति छोड्नेबारे चिन्ताबाट बच्न सक्षम हुनुहुन्छ?
के तपाईं र तपाईंको पार्टनरले एक अर्कालाई परिवर्तन गर्न कोशिस नगरी तपाईं को हो भनेर एक अर्कालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ?
जब असहमति उत्पन्न हुन्छ, के तपाइँ र तपाइँको पार्टनर आदरपूर्वक र तिरस्कार वा नकारात्मकता बिना कुराकानी गर्नुहुन्छ?
के तपाईं र तपाईंको पार्टनरले निर्णय लिने, शक्ति र सम्बन्धमा साझेदारी गर्नुहुन्छ?
के तपाईको पार्टनर तपाईको मिल्ने साथी हो र तपाई उनीहरु हुनुहुन्छ?
के तपाइँ र तपाइँको पार्टनर “तपाइँ” र “हामी” भन्दा “हामी” र “हामीलाई” को सर्तमा बढी सोच्नुहुन्छ?
के तपाईं र तपाईंको पार्टनरले एक अर्कालाई सोशल मिडिया र बैंक खाताहरूमा पासवर्डको साथ विश्वास गर्नुहुनेछ?
के तपाईं र तपाईंको साथीको एक अर्काको राम्रो राय छ – एक overinflated सकारात्मक दृष्टिकोण बिना?
के तपाइँका घनिष्ठ मित्रहरू, साथसाथै तपाइँको पार्टनरको पनि लाग्छ कि तपाइँसँग ठूलो सम्बन्ध छ जुन समयको परीक्षामा खडा हुनेछ?
के तपाइँको सम्बन्ध रातो झण्डा जस्तो छ कि धोका, ईर्ष्या र व्यवहार नियन्त्रण हो?
के तपाइँ राजनीति, धर्म, विवाहको महत्व, बच्चा जन्माउने चाहना (वा छैन) र कसरी बाबुआमाको बारेमा आउँदा तपाइँ र तपाइँको पार्टनरले समान मान साझा गर्नुहुन्छ?
के तपाई र तपाईको पार्टनर तपाईको आफ्नै आवश्यकताहरु, चाहनाहरु र एक अर्काको लागि लक्षहरु त्याग्न तयार हुनुहुन्छ (ढोका नबनाईकन)?
के तपाइँ र तपाइँको पार्टनर दुबैमा सहमत र भावनात्मक हिसाबले स्थिर व्यक्तित्व छ?
के तपाइँ र तपाइँको पार्टनर यौन मिल्छ?
यदि तपाईंले “होईन,” जवाफ दिनुहुन्छ भने खराब समाचार भनेको तपाईंको सम्बन्ध समयको परिक्षणमा खडा हुनेछैन किनकि “केवल तपाईले राम्रो फेला पार्न सक्नुहुन्न भनेको यो एक राम्रो सम्बन्ध हो” भनेको होइन, “लेवान्डोस्कीका अनुसार।
तर शुभ समाचार भनेको ब्रेकअपहरू राम्रो कुरा हुन सक्छ – किनकि “खराब सम्बन्धमा रहनु तपाईको लागि सबैभन्दा खराब सम्भावित चीज हो,” लेवान्डोव्स्कीका अनुसार।
उनले स्वतन्त्रलाई भने: “सम्बन्धको बारेमा राम्रो चीजहरू सिक्नु राम्रो सम्बन्धमा कुनै खतरा छैन” र “यदि तपाई खराब सम्बन्धमा औसत दर्ता हुनुहुन्छ भने, बाहिर निस्कँदा तपाईलाई ठूलो बनाउँदछ।”
त्यसोभए यदि तपाई यी प्रश्नहरूको उत्तर बिना नै गर्नुहुन्छ भने, “तपाईको सम्बन्ध सम्भवतः त्यति राम्रो देखिँदैन – र यो ब्रेक-अप गर्ने समय हुन सक्छ।
नेपालको पक्षमा बोलेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया कार्तिक आर्यन भन्छन्–‘पारिश्रमिक कम गर्न तयार छु’
होटलको क्वारेन्टाइनमा मनीषा कोइराला
Reporter जुन 6, 2020 मनोरन्जन
काठमाडौं : परिवारसहित तीन दिनअघि मुम्बईबाट काठमाडौं आएकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला अहिले राजधानीको एक होटलको क्वारेन्टाइनमा बसेकी छन्। उनले आफ्नो कोरोना टेस्ट पनि गराएकी छन्। उनीलगायत सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ। विदेशबाट आएपछि १४ दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियमअनुसार घर नगई अभिनेत्री उनी आफ्ना बुवाआमासँगै …